I walk slowly. But I never walk backward.
ငါဖြည်းဖြည်းလေးပဲလျှောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မလျှောက်ဘူး။
walk (verb) - လမ်းလျှောက်သည်
never (adverb) - ဘယ်သောအခါမှ၊ ဘယ်တုန်းကမှ
backward (adjective) - နောက်ပြန်၊ နောက်သို့ပြန်သွားသော